Rudzi: sayenzi uye teknolojia
PS3 inodhura zvakadii? Chirevo chePS3 - mutengo
Mushure mekubudirira kwaSony's PlayStation uye PlayStation 2, yakaburitswa muna 1994 na2000, zvichiteerana, kuoneka kwemhando nyowani kwaingoita kunge inguva yenguva. Runyerekupe rwekutanga nezvemutambo mutsva ...
Burglar alarm: kuiswa uye kuiswa
Security alarm ndiyo seti yezvigadzirwa zvehunyanzvi zvinozivisa nezve kupinda zvisiri pamutemo mune yega nzvimbo. Panguva imwecheteyo, inoburitsa ruzha runotyisa uye ichiendesa ruzivo kunzvimbo yekuchengetedza. Munyika yanhasi…
Chii chinonzi gyroscope?
Makumi gumi apfuura, nhare ine Internet yekubatanidza, infrared port, kana Bluetooth technology yaive chinhu chisina kujairika. Iye zvino ese mabasa aya ave kujairana, uye mamwe acho kunyangwe ...
Nanotechnology mumusha uye maindasitiri
Mazuva ese isu tiri kuswedera kuchinjika isingadzivisike iyo nanotechnology yakatakura. Isu tinogadzira zvishandiso zvitsva, tinowana zvakasarudzika zvigadzirwa zvatisina kumbofunga nezvazvo kare. Iko kushandiswa kweanotechnology muhupenyu hwezuva nezuva inobvumidzwa ...
Lenovo B590 Mucherechedzo: yakatarwa, ongororo uye ongororo
Iwo B590 akateedzana anogona kusarudzwa seakanaka bhajeti malaptop, kana uchitenga izvo iwe zvausingafanire kupinda muchikwereti kana zvikwereti. Asi kunyangwe kunyangwe paine mutengo wakaderera (15-20 zviuru maRuble), iyo laptop ...
Samsung Wave 525: zvakatemwa, zvigadziriso, ongororo. Nzira yekupenya sei? Samsung Wave 525 haina kutendeuka: sei Reflash?
Haisi chakavanzika chero kunaani kuti mugove weshumba wekutarisisa unobhadharwa kumusoro-kumagumo mafoni, izvo zvinokatyamadza munhu wese neakanyanya mashandiro uye zvisina mitengo yakanyanya. Nekudaro, pamisangano yese, kutengesa kuri kunyanya ...
Vacuum yekuchenesa magetsi sutu. Zvishandiso
"Guruva rinobvepi?" - iwo mubvunzo ndewekusingaperi uye pane kutaura. Hapana anoziva mhinduro yaro, uye mumwe anofanirwa kurwisa denda iri mazuva ese, kunyanya mumafurati eguta. ...
Vanogadzira yogati yakanaka: chiyero, mhando dzinozivikanwa, sarudzo
Mararamiro ane hutano akabatanidzwa nezvakakwana zvinovaka muviri ari mufashoni nhasi. Chero ani zvake anoongorora chitarisiko chavo uye kugara kwavo zvakanaka vanoziva basa rinoitwa nemukaka zvinogadzirwa nekushanda kwemuviri. TO…
Kusashanda kwemushini wekuwachisa. Zvinokwanisika malfunctions yemuchina wekushambidza
Muchina wekuwacha une tsika yekutyora. Kazhinji muridzi haazive kuti chii chikonzero chekuputsika, uye nekukurumidza anobata foni kufonera tenzi. Pamwechete, zvese ndezvechokwadi. Asi dambudziko ndere ...
Prankers haagari achisekesa. Ndivanaani vari prankers uye nei ivo prank vanobatwa kazhinji vachitadza kunzwisisa kuseka kwavo?
Munyika yanhasi, nhare, nhare kana nhare, yakagara kwenguva refu isingori nzira yekutaurirana nemhuri uye neshamwari. Inoshandiswa nemabhangi kushingairira kushambadzira kwevatengi, sarudzo dzinoitwa nguva dzose. Kunze kwekudaro…
Prestigio Multipad 4: rondedzero yepiritsi uye wongororo
Nekudaro, nhasi uno piritsi rinodaidzwa kuti Prestigio Multipad 4 richaunzwa kwatiri isu pfungwa ndeyekuti mudziyo uyu wave uchifadza vatengi kwenguva yakareba. Asi chii chaizvo? Prestigio ari kusunungurwa ...
Maitiro ekugadzira simbi yekuisira kumba kubva kunzira dzakavandudzwa?
Kunhuhwirira kwekudzungaira, hwema hwekunakidzwa, kana kuraswa kweimba yako yezhizha kubva kune dzakasiyana simbi tsvina inogona kuratidza kutenga chakakosha chishandiso. Professional simbi michina, ongororo ayo anozivikanwa kune wese munhu, akakosha ...
Smartphone Explay Rio ("Explay Rio") - wongororo yevaridzi, mutengo, mapikicha uye hunhu hweiyo modhi
Nhasi uno bhajeti mafoni ari kutanga kuwana mukurumbira chaizvo. Uye izvi zvinonzwisisika, nekuti nechitarisiko ivo havana kumbosiyana neepamberi uye panguva imwechete zvakachipa. Nomuzvarirwo, nekuda kwemutengo waunoda ...
peji 1 peji 2 ... peji 222 Next Page
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 0,508 masekondi.